Ireo fanavaozana trano ireo dia manana ROI ratsy indrindra
Home / Interior design / Ireo fanavaozana trano ireo dia manana ROI ratsy indrindra
2020 / 09 / 26 FisokajianaInterior design 6149 0
Ny tanjonao amin'ny maha mpampiasa vola anao dia tokony hitady fivelomana, ary raha sendra orinasa misedra trano ianao, dia tsapanao fa tena mandaitra loatra fa ny vola fanampiny alentikao amin'ny fanavaozana, vao mainka tsy matanjaka ianao mety ny fidiram-bola. Raha ny marina, misy ny fandraisana andraikitra lehibe noho ny fandoavam-bola ho an'ny tenany ary manome famerenam-bola azo antoka (ROI); ny hafa, mainka izany, ary ireo no ilainao hadiodio.
Na dia tsy tena mpamatsy vola aza ianao, raha manavao ny tranonao manokana ianao mba hananana fahaizana hampiroborobo azy amin'ny vidiny manaraka, dia ilaina ny mahafantatra hoe iza no fanavaozana mendrika ny vola ary iza no avo kokoa ho anao mandalo.
Gazety fanovana mamoaka ny vidiny isan-taona momba ny Varotra vs. Worth Report izay manasongadina ny fanavaozana farany indrindra sy kely indrindra amin'ny fomba fijery ROI. Mifanaraka amin'ny fampahalalana vaovao indrindra momba ny taona 2019, voatanisa etoana ny fandraisana andraikitra 4 azo atao tokony hialanao.
1. Fanampian'ny efitrano fandraisam-bahiny lehibe
Antony iray apetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny lehibe io - iray misy lavidavitra tsy miankina amin'ny besinimaro - raha tsy eo ilay trano tadiavinao hampiroborobo na soloina. Na izany aza, ny efijery feno feno, feno toerana hipetrahana sy lalimoara ivelany, dia tsy mendrika ny vola laninao amin'ny fomba fahitana azy.
Ny sanda iraisan'ny fampidirana efitrano malalaky midrange dia $ 130,986, na izany aza dia mety hampiditra $ 77,785 tombanana amidy indray ao an-tranonao manokana. Raha ny fampahalalana rehetra, dia ho tsara kokoa ianao amin'ny 59.4% amin'ny famatsiam-bolao.
Ny fanampin-efitrano fandraisam-bahiny lehibe ambony dia hanome anao fihenam-bidy ROI. Ny sanda iraisana hivoahana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny lehibe dia $ 271,470, izay hahafahanao manantena ny hamerina $ 136,820, na 50.4% fotsiny amin'ny fandanianao mialoha.
2. Fanampiana efitrano fitsaharana
Mahagaga fa ny fampidirana trano fivoahana any an-trano izay amporisihinao na ahodinkodinanao dia tsy hanatsara ny sarany rehetra amin'izany. Ny fenitra fampidirana lavidavitra midrange dia mitentina 47,427 $. Amin'izany dia hanampy 28,726 dolara amidy indray ianao. Ny sandan'ny famerenam-bola dia 60.6% amin'ny famatsiam-bola fotsiny.
Mety hanao ratsy kokoa aza ianao amin'ny fampidirana lavatory ambony. Any ianao dia mety afaka maminavina handany $ 87,704, izay hamerenanao $ 51,000, na 58.1% amin'ny volanao.
3. Patio tokontany
Heverinao fa ny tokotanin'ny tokotany mivelatra dia mety hanome tombana voalohany amin'ny trano, satria mahatonga ny faritra ivelany ho azo ampiasaina kokoa. Na izany aza, hoy ny vaovao amin'ny tranga hafa. Ny sanda iraisan'ny tokotanin'ny tokontany dia $ 56,906, izay hanampianao $ 31,430 ny vidiny amidy indray. Midika izany fa hihatsara 55.2% fotsiny ny vola napetrakao ao anatin'io iraka io ianao.
4. Fanamboarana lakozia manan-danja
Na dia mety hanangona ROI tsy mampino amin'ny fanamboarana lakozia kely aza ianao (ny lisitra dia mametraka azy 80.5%), alaivo an-tsaina indroa aloha fa tsy mitondra an'io asa io amin'ny ambaratonga manaraka. Ny fanamboarana lakozia midrange manan-danja dia hametraka anao $ 66,196 indray, izay hampianao $ 41,133 mendrika amidy indray. Famerenana amin'ny laoniny 62.1% fotsiny izany.
Ankoatr'izay, ny fanamboarana dakozia lehibe avo lenta dia hanome lanja $ 131,510 iraisana, na izany aza dia tokony ho tafiditra ao anatin'izany koa ny ROI mihena be. Manampy anao manokana ny vola mitentina $ 78,524, izay maneho 59.7% fotsiny amin'ny famatsiam-bola mialoha anao.
Tazomy amin'ny fandinihana ny vola lany amin'ny fanavaozana
Antony iray handaniana vola amin'ny fanavaozana mora ahazoana miverina marin-toerana, na izany aza ireo fandraisana andraikitra etsy ambony dia tsy ao anatin'io kilasy io. Raha tsy izany, izy no mandoa vola hiatrehana ny fanavaozana manome ROI tsy mampino. Ny fanaovana ireo fanatsarana ireo dia mety hanome anao isa be dia be izay takiana aminao ao an-tranonao manokana - mba tsy hivoahana hiala haingana eo an-tsena mba hahafahanao mamindra amin'ny safidy manaraka fampiasam-bolanao.
Previous :: Ny Kabinetra An-dakozia Oak voajanahary sy ny Skylight no kintan'ity fanavaozana ny lakozia ity Next: Tsy simba ny toro-lalana shower. Nahoana ny Vitality no manandrana manamboatra azy ireo?
2020 / 12 / 12 3021
2020 / 11 / 29 4019